जयतु संस्कृतम् आन्दोलनको प्रभाव - Harekpal
जयतु संस्कृतम् आन्दोलनको प्रभाव
हरि गौतम ९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १७:३० मा प्रकाशित
जयतु संस्कृतम् धर्म भूतये, जयतु संस्कृतम् राज भूतये
जयतु संस्कृतम् देश भूतये, जयतु संस्कृतम् विश्व भूतये ।।
यिनै नाराका आधारमा नेपाली विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । नेपालको इतिहासमा छात्रले खुल्ला रूपमा सडकमा उत्रिएर राणाशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलन ‘जयतु संस्कृतम्’ नै पहिलो हो । यसअघि पनि छात्रले राणाशासनप्रति असन्तोष देखाउने प्रयत्न नगरेका होइनन् । वि.सं. १९९५ मा जुद्धशमशेरले एउटी सुन्दर ब्राह्मणी कन्या र अर्की तल्लो जातकी साग बेच्ने सुन्दर युवतीलाई देखेर आफ्ना आठपहरियाद्वारा दरबारमा दाखिला गराएको घटनाले संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीले त्यस कार्यको विरोधस्वरूप नेपालगञ्ज निवासी गोपचन्द्र रेग्मी, भानु आचार्यसमेत एघार जनाले २ बजे राति माटाको हाँडीमा विष्टा भरेर जुद्धशमशेरको सालिकमा खन्याइदिएका थिए ।
यसै विषयलाई लिएर राणाले विद्यार्थीमाथि दमन सुरु गर्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यी विद्यार्थीले धर्ना दिने र सत्याग्रहको कार्यक्रम अख्तियार गरी आफ्नो पहिचान प्रस्तुत गरे । यस आन्दोलनका नेतामा पूर्णप्रसाद ब्राह्मण, श्रीभद्र शर्मा, काशीनाथ गौतम, हरिप्रसाद देवकोटा, पद्यशंकर त्रिपाठी, श्रीप्रसाद गौतम थिए । यिनै कारणले छात्र आन्दोलन क्रमशः बढ्न थाल्यो । ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनले राणाशासनका विरुद्ध जनजागृति गरायो र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई ठूलो मद्दत गर्यो । यो मैदानबाट जन्मिएको ‘संस्कृत छात्र संघ २००४’ नेपालको पहिलो छात्र सङ्गठन हो । यो आन्दोलन १९९७ सालमा प्रजापरिषद्ले गरेको आन्दोलन पछि दोस्रो ठूलो आन्दोलन हुन पुग्यो (अधिकारी, हेमराज २०५८ः २०९) । जयतु संस्कृतम् आन्दोलनले जनतालाई राणाशासन विरुद्ध लाग्नुपर्ने जागरण गरायो र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अघि बढ्न ठूलो मद्दत पुग्यो ।
आन्दोलन अघि बढ्ने अनेक कारणमध्ये तीनधारा पाठशालाका विद्यार्थीलाई एउटा कुरामा चित्त बुझेन । त्यो थियो – संस्कृतबाट उत्तरमध्यमा, शास्त्री र आचार्यसम्म गर्ने र अंग्रेजीबाट आई.ए., बी.ए. र एम.ए. गर्नेका बीच सरकारले गरेको विभेदको पहिलो कारण हो । एउटा अंग्रेजीमा एम.ए. गर्नेले वार्षिक १२ सय पाउँथ्यो भने संस्कृतबाट आचार्य गर्नेले प्रतिवर्ष ६ सय पाउन पनि मुस्किल थियो । एम.ए. हुनेले सरकारी ओहोदामा राम्रा–राम्रा पद पाउँथे । तर आचार्य गर्नेले पाउने भनेको पण्डित पद मात्र थियो । पण्डित नभेट्टाउनेले पुरेत बनेर विवाह व्रतबन्ध, न्वारान, पास्नी, रुद्री–चण्डी पाठ गरेर, काजक्रिया गराएर निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो । कतिपयले तिनलाई ‘टपरे’ भनेर हेला पनि गर्थे । तर उत्तिकै शिक्षा लिएका पण्डितले एम.ए. गर्नेलाई सम्मान नै गर्नुपथ्र्यो । त्यसैले संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीलाई लाग्यो, हामीमा के कमी छ, हाम्रो शिक्षामा ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, गणित, वास्तुकला, शिल्पशास्त्र जे चाहियो त्यही छ । शिल्पशास्त्रले हाम्रो प्राचीन कला, मठमन्दिर देखाएको छ, आयुर्वेदमा विज्ञान छ, कतिपय अवस्थामा एलोप्याथिक डाक्टरले निको बनाउन नसकेका बिरामी आयुर्वेदले निको गराएको छ तर हामीलाई अहिलेसम्म भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्रको अध्ययन गर्न सुविधा दिइएको छैन । यदि यी शास्त्रको अध्ययन गर्न पाइयो भने हामी कोहीभन्दा कम हुने छैनौँ । त्यसैले अब हामीले श्री ३ महाराजकहाँ बिन्ती चढाउनु पर्छ । यो भयो भने हाम्रो हैसियत बढ्छ भनेर विद्यार्थीले एउटा बिन्तीपत्र तयार पारे । त्यसमा निम्न कुरा थिए :
अंग्रेजी पढ्ने र संस्कृत पढ्नेलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने । अंग्रेजी पढ्नेले पाए सरहको सुविधा संस्कृत पढ्नेले पनि पाउनुपर्ने । संस्कृतमा नपरेका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र पढ्न पाउनुपर्ने । भाषालाई महत्त्व दिनुको सट्टा ज्ञान र सीपलाई महत्त्व दिनुपर्ने । संस्कृतमा आचार्य, शास्त्री र अंग्रेजीमा एम.ए., बी.ए.लाई समान स्तर कायम गर्नुपर्ने । अंग्रेजीमा कलेज रहेको छ, संस्कृतमा पनि रहनुपर्ने । मध्यमा परीक्षा दिनका लागि बनारस जानुपर्ने भएको छ, त्यो हटाएर नेपालमै परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्ता माग राखी लेखिएको मागपत्र श्री ३ पद्यशमशेरकहाँ एकप्रति पठाइदिए । विद्यार्थी यसपछि अब केही हुन्छ कि भनेर ताकेता गर्न लागे । अन्त्यमा यी मागपत्र हेरेर श्री ३ पद्यशमशेरबाट यस्तो घोषणा भयो ।
यो मातृभाषा हो । यसमा विज्ञान छैन । अहिले अंग्रेजी विश्वभाषा भएको छ, यसमा शिक्षा दिए संसारका जुनसुकै ठाउँमा पनि हेलमेल हुन सकिन्छ । यस मृतभाषाले काजक्रिया, न्वारान, पास्नी, विवाह, व्रतबन्ध, सप्ताह, पुराण, चण्डी, रुद्री गर्नलाई मात्र काम दिन्छ । त्यसैले यसमा अरू कुनै बोझ थप्नु छैन । फेरि श्राद्ध गराउनेलाई नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्रको ज्ञान दिएर के काम ! फेरि टपरेवृत्ति गरेर खाने मृत भाषा कहाँ अंग्रेजी भाषा सरह हुन सक्छ ! पद्यशमशेरको यस्तो भनाइले नेपालभर तहल्का मच्चियो । सारा वेदपाठ गर्नेहरू, संस्कृतका अनुयायीहरू, संस्कृतमा आस्था राख्नेलगायत छात्रवासका विद्यार्थीले जयतु संस्कृतम्को नारा लगाउँदै छात्रावास छाडेर बाहिर निस्के । संस्कृत विभागका डाइरेक्टरलाई ब्रह्मराक्षस, रानीपोखरी पाठशालाका नौजना पण्डितलाई नवग्रह र पद्यशमशेरलाई राजावेन उपाधि दिएर छात्रवास शून्य भयो ।
छात्रवास छोड्ने विद्यार्थी त्रिपुरेश्वर, बागमती कालमोचन घाटमा बस्न थाले । यसरी संस्कृत पाठशालामा हड्ताल हुनुको कारण पद्यशमशेरले संस्कृत भाषालाई मृतभाषा भनेको कुरा चारैतिर फैलियो । कति अभिभावकले छात्रलाई आफ्ना घर लगे । टाढाटाढाका विद्यार्थीले जयतु संस्कृतम्को नारा लगाउँदै भिक्षा मागेर हिँड्न थाले । यो अवस्था देखेर कतिले भन्थे, ब्राह्मणले सन्तोष लिनु पथ्र्यो । अझ श्री ३ रिसाए भने डाँडा कटाउन सक्छन् । कतिले ब्राह्मणलाई किन हेला गरेको भनेर सदासयता पनि प्रकट गरे । राजाले संस्कृत भाषालाई मृतभाषा किन भन्नुपर्यो । यदि त्यसो हो भने त्यही भाषाले किन काजक्रिया गर्ने त ? यस किसिमले आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा केही फरक परिवर्तनका धर्सा देखिन थाले, सरकारले विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
आन्दोलनमा नारासहित जुलुस प्रदर्शन र प्रवचन शुरू भयो, मानिसले प्रशस्त भिक्षा दिए । छात्रहरूले समाजसेवी, बुद्धिजीवी र राजनीतिक व्यक्तिका साथै तमाम धार्मिक व्यक्तिको समर्थन पाउन थाले । यो आन्दोलनमा तीनसय विद्यार्थीको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँमा पुराण चलिरहेको थियो । पुराणको साङ्गे हुने दिन वि.सं. २००४ असार १० गते कमान्डर इन्चिफ मोहनशमशेरको आज्ञाले लाठसाहेब बबरशमशेर जङ्गबहादुर राणा विद्यार्थीलाई मनाउन आए । उनले विद्यार्थीसँग कुरा गर्न जनरल शुरशमशेर राणाको दरबारमा विद्यार्थी बोलाए । उनी धार्मिक भएकाले पर्व–पर्वमा विद्यार्थीलाई दान दक्षिणा, सिदा दिने गर्दथे । बबरशमशेर, शुरशमशेर, पंं. हेमराज शर्मा र विद्यार्थीका बीच कुरा भए । विद्यार्थीका माग पूरा गर्ने र रेस्टिकेट विद्यार्थीको सजाय रद्द गरी छात्रवासमा फर्काउने सहमति भयो । त्यो सहमति दशैँ अगाडि नै पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर सरकार आलटाल गर्दै, मध्यमा परीक्षा दिन फारम भर्ने समय आएकाले नेपालमा टेस्ट परीक्षा दिएर मात्र बनारसमा मध्यमाको फारम भर्न पाइन्थ्यो । यसमा कोही टेस्ट परीक्षा बहिष्कार गर्ने थिए भने कोही परीक्षा दिने मनस्थितिमा थिए । परीक्षा बहिष्कार गर्नेमा कमलराज रेग्मी, कुलमणि देवकोटा, नारायणभक्त खनाल र दामोदर शर्मा छात्रावास छोडेर बनारसतर्फ लागे । यस विषयमा केवलपुरे किसान भन्छन् ः
पाठशाला भर्ना भएँ, पाएँ भात खान ।
आन्दोलनमा भाग लिँदा झण्डै गयो ज्यान ।।
चार सालमा निकालिएँ पाठशालाबाट ।
भीक माग्दै मैले कुरेँ कालमोचन घाट ।।
तेसपछि देश निकाला मैले हुनु पर्यो ।
अलि मैन्हा मेरो बास बनारसमा सर्यो ।।
कतिपय विद्यार्थीले यस्ता कविता गाउँदै हिँडेका पनि थिए । वि.सं. २००४ आषाढ १ गतेदेखि सुरु भएको जयतु संस्कृतम् आन्दोलन कहिले सशक्त, कहिले शिथिल हुँदै वि.सं. २००४ मार्ग २२ गते चरमोत्कर्षमा पुग्यो । त्यसपछि कति छात्रले बनारस जाने योजना बनाए त कति खर्चको बन्दोबस्त गर्न आआफ्ना घरतर्फ लागे । केही दिनपछि बनारस पुगेका कति विद्यार्थी पढाइ लेखाइमा लागे भने कोही पढाइका साथै बीपी कोइरालाको सङ्गतमा पुगेर नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सदस्यता लिई राजनीतिमा सक्रिय भए । त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीले पनि हड्ताल सुरु गरे । त्यसले र जयतु संस्कृतम्को आन्दोलनले जनमानसमा ठूलो प्रभाव पार्यो र आन्दोलनको राँको गाउँगाउँसम्म पुग्यो । यसरी विद्यार्थी आन्दोलन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक अङ्ग बन्न पुग्यो ।
लेखन स्वतन्त्रताः चिन्तनको नयाँ धारा
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:३०
त्यो नराखिएको बम
२७ बैशाख २०७७, शनिबार ११:३०
सरकार छ रे हो ?